Oge eruola ịkwụsị nkesa mgbasa ozi akpaaka maka SEO | Martech Zone
Otu ọrụ anyị nyere ndị ahịa anyị bụ ịlele ogo nke backlinks na saịtị ha. Ebe Google jiri nlezianya lekwasịrị anya ngalaba nwere njikọ sitere na isi mmalite ndị na-eweta nsogbu, anyị ahụla ọtụtụ ndị ahịa na - alụ ọgụ - ọkachasị ndị goro SEO ụlọ ọrụ na mbụ na backlinked
Mgbe na-ajụ niile nke na-enyo enyo njikọ, anyị ahụwo oganihu ogo na otutu saịtị. Ọ bụ a siri ike usoro ebe ọ bụla njikọ na-enyocha ma kwenye na-ahụ na ọ na-abịa site a ọma akụ… ma ọ bụ na akụ na-adịghị gafere spammy njikọ ndị ọzọ na-adịghị mkpa ngalaba.
N’ọnwa a, ka anyị tụlere otu n’ime ndị ahịa anyị, anyị chọpụtara ngalaba a maara nke ọma nwere ụfọdụ njikọ na - eweta nsogbu na ya - PRWeb. Anyị jụrụ ngalaba PR nke onye ahịa ahụ ma ha kwenye na ha na-akwụ ụgwọ maka nkesa mgbasa ozi na-akpaghị aka site na ọrụ PRWeb.
Mgbe ahụ anyị mere nyocha nke PRWeb na ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ na-akpaghị aka ma chọta ụfọdụ data na-enye nsogbu. Ọ na-egosi ma PRLeap na PRWeb anọwo na-adaba na ọdịda ebe ọ bụ na Panda 4.0 wepụtara.
Enwere otutu nkata banyere nke a na ụlọ ọrụ SEO - ụfọdụ ndị na - ekwu na nkesa ka na - arụ ọrụ, ndị ọzọ ekwuola na ha agaghị emetụ ọrụ nkesa mgbasa ozi. Ọ pụtaghị na ọrụ nkesa niile adaala dị ka PRWeb na PRLeap nwere.
Nke a bụ ihe m kwenyere.
Echere m na nkesa mgbasa ozi akpaaka na-agba ọsọ ya. Anyị ahụbeghị ihe dị iche na mgbasa ozi anyị mgbe anyị jiri nkesa na-ejighi nkesa. Ekwetaghị m na onye ọ bụla na-enyocha saịtị akụkọ maka mbipụta akụkọ n'ihi na mkpọtụ a na-apụghị ịnagide. Ọ bụrụ n'inweta akụkọ sitere na ọrụ ndị ahụ, ha na-egosi ọtụtụ echiche mana ị ga-ahụ obere ma ọ bụ enweghị mmetụta na okporo ụzọ laghachi na saịtị gị.
Ọ pụtara na ekweghị m na PR? Ọ bụghị n'ezie. Ekwenyere m na atụmatụ mmekọrịta ọha na eze na-arụsi ọrụ ike ebe a na-agbanye akụkọ gaa na mgbasa ozi mgbasa ozi dị mkpa ka bụ atụmatụ dị mma. Nke ahụ bụ ọrụ chọrọ ngwaọrụ nyocha, oge na mbọ ọ na-efu obere ntakịrị. Mana ị nwetara ihe ị kwụrụ.
Anyị anaghịzi etinye ego na mgbasa mgbasa ozi maka mgbasa ozi njikarịcha nyocha anyị. Ọ baghị uru, ọ naghị erute ndị na-ege ntị dị mkpa, ọ naghị enye nsonaazụ bara uru ọ bụla, yana - ka njọ - ọ nwere ike itinye ndị ahịa anyị n'ihe egwu site na itinye njikọ na saịtị ha na ngalaba nwere ikike dị egwu. Nke ahụ nwere ike itinye ọkwa ha na okporo ụzọ na ihe egwu.
Tags: nkesa mgbasa ozi na-akpaghị akanjikọ azụbacklinksmbipụta ndị nchụ nta akụkọpịa mgbasa nkesaprleapprwebsearch engine rankingsọchụchọ ọkwaA
Hazigharia, degharia ma wepu ọdịnaya
Nov 26, 2014 na 2:05 PM
Daalụ maka ide na isiokwu a Doug. Anọ m na-ele anya na PRWeb ụbọchị ọzọ na-anwa ịchọpụta ma nkesa na-akpaghị aka bụ ụzọ m ga-aga ma ọ bụ. Isiokwu gị nyeere m aka ime ka uche m dịrị na nke ahụ! Dị ka ọ dị na mbụ, ị batara ọzọ! Daalụ!